energy crisis zimbabwefuel crisisBusinessNews
As we rightly suspected the government has now increased the price of fuel. While this latest price increase will no doubt be painful to businesses and ordinary Zimbabweans who are struggling it...
economic crisis zimbabweharare city councilBusinessHealthNews
Harare City Council Hikes Clamping Fines By 1 000%
Harare City council have made an eye-popping adjustment to clamping fees in their latest supplementary budget which was approved and adopted yesterday. Clamping fees were increased by 1 000% and...
July 12, 2019/No comment
air zimbabweeconomic crisis zimbabwenrzBusinessNews
Zimbabwe Needs US$34 Billion To Restore Infrastructure-AfDB
Over the past two decades, Zimbabwe’s infrastructure has hardly seen any investment. According to an AfDB economist, Zimbabwe will require US$34 billion over the next decade to restore its...
Climate change continues to take its toll on the world with poor countries like our beloved Zimbabwe being the hardest hit. The 2018-19 drought alone has already left 5.7 million Zimbabweans...
More News and Tips (135)
English ZIMSEC O Level Notes- Updated 2019